Pane here shandisi yekutsvakurudza mashandisirwo ekuongorora vashori vangu?
Hapana chikonzero chekutaura kuti ruzivo rwakagara ruri chinhu chakasimba. Asi nhasi, kuva neruzivo rwekukwikwidza kwakanaka kunogona kukurumidza kuva chigamba chikuru chekutungamirira uye chaizvoizvo kutonga niche yose yemusika nebhizimisi rako. Uye hongu, pane dzakawanda zvakananga kumashure ekutsvakurudza mashandisirwo ekuwana ruzivo rwakakosha rwekukunda zvibereko zvepurojekiti yako yepaIndaneti.
Pasi pandinoenda kukupa mufananidzo wakazara wekukwikwidza. Kunze kwe backlink tsvakurudzo dzokutsvakira ivo pachavo, ndaiwanzoshandira imwe yevamwe vabatsiri vepaIndaneti kuti vasarudze pazvinhu zvose zvewebhu. Inzwa wakasununguka kuti ubatsirwe nemhinduro dzakajeka uye zvirongwa zvepamusoro zvinobudirira zvinoshandiswa nevashamwaridzana vako vari pedyo. Ngatitarise izwi rakanakisisa, mota, social media uye backlink tsvakurudzo yekutsvaga kuti usapinda mumakwikwi uye utungamirire pamusoro pevatengi vemisika yako.
Ndakashandisa SpyFu keyword tsvakurudzo yekushandisa kuva nemifananidzo yakazara pane mumwe nomumwe. Pamusoro pokuzadza iyo chinhu chinokosha, SpyFu ichakuratidzai munhu wose akambosarudza pairi. Uye iwe nguva dzose unosununguka kushandisa sarudzo iyi inokosha pane zvose zvakawanikwa nevakwikwidzi vako kuburikidza nehuwandu hwemakore gumi achangopfuura, kuti vakagadzirisa sei mapoka avo makuru ezvinyorwa zvinyorwa, uye nenzira ipi iyo vakakwanisa (kana kuti vakakundikana) kuwedzera kutendeuka kwavo. Iwe unogona kungoita zita rewebsite yako pachako kuti uwane mazano anokurumidza pane urongwa hwemashoko makuru ekurudzirwa kwebhizimisi rako.
Pakati pezvinyorwa zvakanakisisa zvekutsvakurudza kumashure, ndakawana Moz Pro uye Semalt Analyzer sepamusoro. Zvose izvi zvakaratidza kuti dzakanaka pakufunga nenzira yandinofanira kuumba mamwe backlinks kune webhusaiti yangu. Kunyanya zvakanyanya, ndakashandisa mukukwikwidza kwavo backlink pakutsvakurudza mabhuku anozivikanwa seWatch Site Explorer uye Analyzer pachayo. Nenzira iyo, ndakakwanisa kupinda iwe webhusaiti yangu kana kuti chero URL yekukwikwidza kuti ndione chero upi zvake hwepachikwata chekubatanidza - ingani hukama uye kubva kune dzimwe nzvimbo dziripo, chii chinotsigisa uye nzvimbo dzepeji dzave nadzo. Kuita kudaro, ndakanga ndisingopfuura kushamiswa - kushandisa zvese zvishandiso zvakaonekwa zvakanyanya kubatsira kuti ndizive zvinangwa zvepamusoro zvandinokwanisa kusvika.
Kufunga nezvemotokari, ndinotenda Shanduro yakadaro ndiyo yakanakisisa inhare iri pano. Izvo zvakaratidza kuti zvakakosha nokuda kwekuwana kunzwisisa kwakakosha pamusoro penzira dzakanakisisa dzekutengesa nzira dzevadzidzi vangu vepedyo. Zvakatorwa zvakakwana, Webhusaiti yakadaro inogona kukuratidza iwe inotevera nhamba yemotokari yemakwikwi ako: mushanyi kuverengera, nhoroondo yakajeka pamusoro pehuwandu hwekushanyira, kutarisa kwemaji peji, kuwedzera kwezinga, traffic geography, uye nezvimwe.
Usanonoka kuedza Buzz Sumo nokuda kwekupikisa pamakwikwi ako munharaunda yemagariro evanhu. Iyi nyanzvi yekutsvakurudza inyanzvi ine mazamu akawanda akasimba, kunze kwokungoteerera mukati pamusoro pekukurukurirana kwako. Inogona kushandiswa pakuzara kwakakwana kwekunzwisisa pamusoro pezvinhu zvakabatanidzwa zvakanyanya, zvinyorwa zvipi zvayo zvakanyanyogadziriswa, zvichitsvaga simba ravo rinokurudzira pane zvekugarisana nevamwe, pamwe chete nezvikamu zvakakurumbira zvikuru zvezvakagadzirwa, zvinyorwa zvinowanikwa uye hurongwa hwekutumira. Uyezve, chigadzirwa chacho chakave chakanakisisa chepakati-ne-kuongororwa rutivi kuti iite kusiyana kwakanyatsoenderana nekufambira kwangu Source .